मानवताले मात्र म र तिमी एउटै हो भन्नेकुराको आभास गराउँछ !! - News Portal in Nepali
स्टिम न्युज वि.सं ७ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:३९
विश्व समाजको सकारात्मक परिवर्तनलाई चिन्तन गर्ने र त्यो विचारधारासँग ओतप्रोत जुन अमानवीय जातिवाद, कुसंस्कार कुरीति, कुप्रथा, रुढीवादी र अन्धविश्वासको अन्त्य गरी एउटा सभ्य, र मानवतावादी समाजको परिकल्पना गरेर मात्र प्रगतिशील समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
मानिसको जन्म मरण एउटै हो । सबैको रगत एकै हो।यो रातो नै हुन्छ। यो संसार सबै जीबको साझा हो । जहाँ कुनै विभेद छैन । तर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवमा किन विभेद ?
मानवता अति सरल चीज हो!! जसमा न धर्म छ, न जाती छ, न हिमाली छ, न पहाडी छ, न पूर्वेली छ, न पश्चिमेलि !! जात मात्रै दुई प्रकारको हुन्छ एक पुरुष त अर्को महिला।अनि कसरी यी बिविध जातिमा खण्डिकरण गरेर बिभाजित गर्ने काम हुन्छ?छ त केवल मानिस त्यस भित्रको मानवता !!
जस्तै कुनै पनि चीज वस्तुमा राम्रो र नराम्रो गुण हुन्छ त्यस्तै मानिसमा पनि मानवता भए पछि दानवता पक्कै हुनु पर्छ !!
एउटा मानिसमा मानवता र अर्को मानव दानवता कसरी विकास हुन्छ त ??
कुनै मानिस जनमिन्छ त पहिले उसलाई धर्म भित्र राखिन्छ र नाम दिइन्छ, जात दिइन्छ, !!
धर्मानुसरको कर्म सिकाइन्छ र समाजको नियम कानुन सिकाइन्छ, तर मानवताबाट टाढा राखिन्छ !!
उसलाई सिकाइन्छ यो त भन्दा सानो हो, यो त भन्द ठूलो हो तर कहिले सिकाइदैन की यो पनि तिमी जस्तै मानव हो , यसलाई पनि तिमीलाई जस्तै आगोले पोल्छ र चिसोले कठ्याङ्ग्रिन्छ !!
त्यसैको परिणाम आज शुद्ध मानिस भेट्न गार्हो छ कोई हिमाली छ, कोई पहाडी छ, कोई हिन्दू छ, कोई मुस्लिम छ, कोई इशाई छ, कोई कोई बुद्धिष्ट छ भने कोहि ठुलो जात र धर्मको छ भने किहि सानो जातजातिको भने खण्डित किन गरिन्छ?
खै त मानिस र मानवता ??
त्यसमा पनि आजको नेपालको समाजलाई हेर्ने हो भने !!
कोई ब्राहमण भेटिन्छ, कोई क्षेत्री भेटिन्छ, कोई वैश्य, भेटिन्छ र कोई सुध्र भेटिन्छ र उनीहरूका अनेकौं शाखा र उप शाखाहरु भेटिन्छ !!
अब तपाईं हामीले मानव र मानवता भेट्न कहाँ जाने त ??
आजको बैज्ञानिक युग र एकाइसौ सताब्दिको विचारमा मानवता खोज्न कहीं जानु पर्दैन मात्र मानवको भ्रमका अप्राकृतिक खोलहरु एक-एक गरी उतार्दै जाने हो भने
त्यहाँ मात्र मानव र मानवता भेटिन्छ !! तर विडम्बना त्यो भ्रमका खोलहरुको हजारौं वर्षदेखि आदी भएको मानवले सजिलै छोड्न कहाँ सक्छ र !!
हामी एक अर्कालाई त ठूलो कि म ठूलो भने होडमा आफ्नै साथी नाता-गोता माथि अन्याय र अत्याचार गरिरहेका हुन्छौ मात्र हाम्रो झुटो सम्मान लागि !!
हामीले जीवनमा जे कुराको अभ्यास गर्यो त्यो कुरा हामीमा हावी हुन्छ !! जस्तै हामीलाई सुत्न शान्त बतारण र सफा ठाउँ चाहिन्छ भने कल्पना गर्नुहोस ती मानिसको जुन सडकको पेटीमा मज्जाले सुती रहेका हुन्छन् !! के हामी सडकको पेटीमा सुत्न सक्छौ हो कदापि सकिन्न तर एक रात दुई रात पछि त हाम्रो पनि त्यही आदत भाई हाल्छ !!
समाजमा पनि त्यस्तै राम्रो कुरा भन्दा नराम्रो कुराको अभ्यास गराउदैं छ !!
धर्म र जातीको विष लाई घोलेर म र हामी ठूलो भन्ने भ्रमको खेती गराएर मानवतालाई मार्दै छ !!
मानिसको पहिलो उदश्य मानवतालाई बचाउ भन्ने हुनु पर्छ !!
त्यसैले हिन्दू, बुद्धिष्ट, ईसाई, इस्लाम होइन पहिले मानव बन्नु पर्छ
ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र होइन मानव बन्नु पर्छ !!
मानव र मानवता मात्र प्रकृतिको उपज हो !!
अरु सबै एउटा भ्रमको खेती हो !!
अमानवीय जातिवाद मुर्दाबाद !!
वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दाबाद !!